Microsoft OneNote အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
16.0.14326.20180 for Android
4.3 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（70.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Microsoft OneNote: Save Ideas and Organize Notes
သင်၏အတွေးများ၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများနှင့်အတွေးအခေါ်များကို စုစည်း၍ သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ဖြင့်သင်၏ဘဝတွင်အရေးကြီးသောအချိန်ဇယားဆွဲရန်စီစဉ်ခြင်း။ Microsoft OneNote သည်သင်၏ဖုန်းသို့မှတ်စုများကို၎င်းနှင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
OneNote ဖြင့်ကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်သည်၊ အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်မှုခဏတာကိုရယူပြီးသင်၏အမှားများစာရင်းကိုခြေရာခံနိုင်သည် မေ့လျော့ဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။ မှတ်စုများကိုရေး၊ မှတ်စုတိုများရေးပါနှင့်သင့်ဖုန်းပေါ်တွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံကြမ်းစာအုပ်လုပ်ပါ။ ဓါတ်ပုံများကိုဖမ်းယူပြီးသင်၏မှတ်စုများသို့ဓာတ်ပုံများထည့်ပါ။
အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်ရန်သင့်စက်များပေါ်တွင်မှတ်စုများကိုစည်းညှိပါ။ အကြံဥာဏ်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင်၏စာရင်းကိုအိမ်၌၊ ရုံး၌သို့မဟုတ်သင်၏စက်ကိရိယာများကို ဖြတ်၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏မှတ်စုများကိုအလျင်အမြန်နှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေပါ။
မှတ်စုများကိုယူပါ၊ အတွေးများကိုမျှဝေပါ၊ ယနေ့သင် Microsoft OneNote ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်အခါ စုစည်း၍ ပူးပေါင်းပါ။
ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုသိမ်းဆည်းပြီးစနစ်တကျစုစည်းပါ။
•မှတ်စုရေးပါ၊ မှတ်စုရေးပါ၊ သင်၏အတွေးများကိုမှတ်စုစာအုပ်ထဲသို့ရောက်အောင်ဝက်ဘ်မှဆွဲယူပါ။
• OneNote ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပတ္တူစကိုသုံးပါ အကြောင်းအရာများကိုသင်လိုချင်သည့်နေရာတွင်နေရာချပါ။
စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စီးပွားရေးကဒ်များကို OneNote သို့ချက်ချင်းစကင်ဖတ်ပါ။
• OneNote သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်သို့လက်စွပ် ၃ ချောင်းတွဲပေးသောဒီဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်သည်။
•မှတ်စုများကိုကဏ္sectionsများနှင့်စာမျက်နှာများဖြင့်စီစဉ်ခြင်း၊ အတွေးအမြင်များကိုကျောင်း၊ အိမ်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်တွင်ကွဲပြားမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ပါ။
•သင့်မှတ်စုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းများဖြင့်စုစည်းပါ၊ OneNote ကိုမှတ်စုစာအုပ်၊ ဂျာနယ်သို့မဟုတ်မှတ်စုစာအုပ်အဖြစ်သုံးပါ။
• OneNote သည်သင်၏မှတ်စုများကိုကိရိယာများအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ပြီးလူအများအပြားကိုအလုပ်လုပ်စေနိုင်သည် တစ်ချိန်တည်းမှာအတူတကွအကြောင်းအရာများအတူတကွပါဝင်သည်။
Notepad badge သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပျံဝဲသွားပြီးသင်၏အတွေးများကိုအချိန်မရွေးမြန်မြန်ရေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ မှတ်စုများကိုလျင်မြန်စွာမှတ်သားရန်အတွက်စတစ်ကာများကိုမှတ်သားပါ။
•အစည်းအဝေးမှတ်စုများကိုယူပါ။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းထပ်တူပြုခြင်းနှင့်တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ ။ •သင်၏အဖွဲ့သည်မည်သည့်စက်ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေသင့်မှတ်စုများကိုယူပြီးသင်၏အကြိုက်ဆုံးကိရိယာများတွင်သိမ်းဆည်းပါ။ စာသား၊ အသံ၊ မင်နှင့်ဝဘ်ချိတ်ဆက်မှုများကိုရောနှောခြင်းစာသင်ခန်းများသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခြင်း။
Microsoft Office နှင့်အတူပိုမိုကောင်းမွန်သော
OneNote သည်ရုံးမိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် Excel သို့မဟုတ် Word ကဲ့သို့သင်၏အကြိုက်ဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
မှတ်စုများရေးခြင်း၊ အတွေးအခေါ်များသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းနှင့်အတူလိုက်နာရန် Microsoft OneNote ။
Android အတွက် OneNote နှင့်ပတ်သက်သည့်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေများကို http://aka.ms/OnenoteAndroidFAQ တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
• Android OS 5.0 သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းလိုအပ်သည်။
OneNote သည် Microsoft OneNote 2010 ပုံစံနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖန်တီးထားသောလက်ရှိမှတ်စုစာအုပ်များကိုဖွင့်လှစ်သည်။
•သင်၏မှတ်စုများကို OneDrive for Business နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ချိန်ကိုက်ရန်သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ရုံးခန်းနှင့်ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။ 365 သို့မဟုတ် SharePoint အကောင့်။
ဤအက်ပ်ကိုမိုက်ခရိုဆော့မှဖြစ်စေ၊ တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းမှဖြစ်စေသီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိမှုကြေငြာချက်နှင့်စည်းကမ်းချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များရှိနိုင်သည်။ ဤစတိုးနှင့်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအချက်အလက်များသည် Microsoft သို့မဟုတ်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်၊ ယူအက်စ်သို့မဟုတ် Microsoft သို့မဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းထုတ်ဝေသူများနှင့်သူတို့၏နိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့၊ ပြုပြင်သည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကအဆောက်အ ဦး များကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Android ရှိ OneNote အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအတွက် Microsoft ၏အဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက် (EULA) ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သင် https://support.office.com/legal?llcc=en-us&aid=OneNoteForAndroidLicenseTerms.htm သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုသင်သဘောတူသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ privacy ဆိုင်ရာကြေငြာချက်ကို https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement တွင်ရရှိနိုင်သည်
How to File Notes in OneNote for Windows 10
Kyaw. Lin. Aung Kla